Nyefee na Ndi ana-akpo, Video, Photos na Music si iPod ka HTC
Anya isi na gị iPod ka echekwara ọtụtụ narị dollar uru nke songs na video zụrụ iTunes, i nwere ike na-amasị nyefee gị HTC One. Ihe niile ị chọrọ ime bụ ịnyagharịa ka iTunes nchekwa na kọmputa na-akpali ha gị HTC One. Otú ọ dị, iTunes dara mkpụmkpụ mgbe songs ma ọ bụ video na gị iPod na-jidere si weebụsaịtị. Na nke a, na-eme ka iPod ka HTC transfer, i kwesịrị isere nkwado si a ọzọ ngwá ọrụ. The Wondershare MobileTrans bụ ọkachamara ekwentị transfer ngwá ọrụ, na-enye gị ohere iji nyefee na tọghata music na video bụghị zụrụ na iTunes na zụrụ ndị gị HTC na otu Pịa. Ọzọkwa, kọntaktị, foto, kalenda, na iMessages nwekwara ike depụtaghachiri n'otu oge.
Nyefee iPod ka HTC na 1 Pịa
Ịgbanwee ọdịnaya site n'otu ekwentị ọzọ, na nkwado ndabere na mpaghara a ekwentị ma weghachi na ibe-1 Pịa.
Nyefee music si iPod ka HTC Otu / Wirefile / Ọchịchọ na ndị ọzọ.
Detuo ha niile kọntaktsị, kalinda, iMessages si iPod ka HTC ekwentị.
Tọghata ọ bụla ọdịyo na video ka HTC enyi na enyi usoro.
Bugharịa photos na Photo Library, Igwefoto Roll na ọbụna iPhoto si iPod ka HTC.
Na-arụ ọrụ ndị zuru okè na iPod aka 5/4/3 na-agba ọsọ iOS 9/8/7/6/5, na otutu HTC ngwaọrụ. Mụtakwuo >>
Jiri a Mac? Biko atụgharị Wondershare MobileTrans maka Mac
Mfe, ngwa ngwa, Easy
Na a smart na nkenke interface, ị nwere ike ngwa ngwa na-ghọtara otú nyefee data si iPod ka HTC na 1 Pịa.
Ọ bụghị nnọọ Nyefee Music
E wezụga music, i nwere ike iji ngwá ọrụ a nyefee fim, kọntaktị, foto, Podcast, iTunes U, TV Gosi na ndị ọzọ.
Nkwado ekwentị Carriers
Ọ na-akwado T-Mobile, Sprint, na & t, Verizon. N'ihi ya, i nwere ike nyefee iPod gị HTC ekwentị ma ọ bụ mbadamba n'agbanyeghị ihe ya ekwentị ụgbọelu bụ.
Ndabere iPod, Weghachi HTC
Gị HTC ngwaọrụ bụghị gị aka ugbu a? Echegbula. Ị nwere ike ndabere gị iPod mbụ na weghachi mgbe ọ bụla ị chọrọ. (Nani Windows version eme)
Nyefee iPod ka HTC
Ma gị iPod na HTC ngwaọrụ nọ gị n'aka? Ọfọn, ị nwere ike na-nyefee iPod data ka HTC One / Ọchịchọ / Wildfire ozugbo.
Nzọụkwụ 1. Wụnye iPod ka HTC Nyefee Ngwá Ọrụ on PC
Ihe mbụ bụ iji wụnye-agba ọsọ ahụ iPod ka HTC transfer ngwá ọrụ na Windows PC. Na-agba ọsọ ya, na isi window-abịa si. Pịa Malite ịkwaga na-nzọụkwụ ọzọ.
Cheta na: Lelee ma ị rụnyere iTunes ma ọ bụ. Ọ bụrụ na, wụnye ya.
Nzọụkwụ 2. Jikọọ gị iPod na HTC ka PC site na eriri Gịnị
Jiri USB Gịnị jikọọ gị iPod na HTC ngwaọrụ PC. Ma ngwaọrụ ga-kama ahụrụ. Mgbe ahụ, dị ka ị na-ahụ, gị iPod na HTC ngwaọrụ ga-egosi na window.
Nzọụkwụ 3. Nyefee kọntaktsị, kalinda, iMessage, Music, Photos na Video si iPod ka HTC
Ele ọdịnaya ị chọrọ nyefee si iPod. Mgbe ahụ, pịa Malite Copy. Na mmapụta dialog, ị nwere ike na-edebe dum transfer usoro.
Gị ika ọhụrụ HTC ka bụ iji? Jiri ya nwayọọ. Na ị na-enwe ike ndabere gị chọrọ data na iPod, ma weghachi gị HTC ngwaọrụ gị mma?
Nzọụkwụ 1. ẹkedori iPod ka HTC transfer ngwá ọrụ
Mgbe wụnye, ẹkedori iPod ka HTC transfer ngwá ọrụ na Windows kọmputa. Mgbe ya isi window egosi na n'elu, Gaa na nkwado ndabere na weghachite mode na pịa ndabere
Nzọụkwụ 2. ndabere Data on iPod ka PC na 1 Pịa
Ikwunye na ihe Apple eriri USB jikọọ gị iPod na kọmputa. The iPod ka HTC transfer ngwá ọrụ ga-ozugbo ịchọpụta na-egosipụta gị iPod na n'aka ekpe. Ke n'etiti bụ ọdịnaya. Nọgide nnọọ na-ọdịnaya na ị chọrọ nkwado ndabere na mpaghara ticked. Mgbe ahụ, na-aga Malite Copy.
Nzọụkwụ 3. Weghachi Your HTC na iPod ndabere File
Kwupu gị iPod-esi na gị HTC ngwaọrụ njikọ. Pịa Back to homepage wee pịa Weghachi. Mgbe gị HTC ngwaọrụ a egosipụta na n'akụkụ aka nri, na-aga na họrọ iPod ndabere na n'aka ekpe. Na kasị, ị nwere ike weghachite kọntaktsị, kalinda, ihe music, video, foto na iMessages si iPod ndabere faịlụ ka HTC. Jide n'aka ihe ị chọrọ iji weghachi na pịa Malite Copy.
Ịgbanwee si iPhone ka HTC
Nyefee faịlụ site HTC ka Samsung
Detuo ọdịnaya site HTC ka HTC
Ibufee ọdịnaya site na HTC ka iPad
Ịgbanwee si gam akporo ka iOS
Nyefee Music si iPod ka Android
Akwagakwa Data si na ekwentị ekwentị
Nyefee iPod Music ka iPhone
Ibufee ọdịnaya site na iPod ka iPod
Best HTC mmekọrịta Manager Alternative
> Resource> Nyefee> Nyefee Ndi ana-akpo, Video, Photos, Kalinda, iMessage na Music si iPod ka HTC